INetflix vs Disney Plus - Iyiphi Insiza Yokusakaza Ehamba phambili? - Ezokuzijabulisa
Akunabo abantu abangawathandi ama-movie, uchungechunge lwe-TV, noma imibukiso. Abanye bayimilutha yayo, kuyilapho abanye beyibukela nje ukuzijabulisa. Izinhlelo zokusebenza eziningi zinikela ngama-movie amahle nezinhlelo ze-TV, ezifana neNetflix, Hotstar, Amazon Prime, Disney Plus, nokunye okuningi. Umuntu ngamunye unokukhetha kwakhe ngokuya ngezinhlobo zemibukiso noma ama-movie athanda ukuwabuka.
Okuhamba phambili kakhulu kuzo zonke izinhlelo zokusebenza yiNetflix neDisney Plus. Noma kunjalo, ngayinye yazo inokuqukethwe kwayo futhi inezithameli zayo. Phambilini iDisney Plus neNetflix bebevame ukusebenza ndawonye, ​​lapho iDisney Plus ivumele iNetflix ukuthi isakaze eminye imibukiso nama-movie wayo woqobo kuhlelo lokusebenza. Kodwa-ke, manje lezi zinhlelo zokusebenza ezimbili zinemvelaphi yazo ehlukile futhi azisebenzi ndawonye.
Kufanele udideke ngokuthi yiluphi uhlelo lokusebenza olungcono kakhulu lwama-Movie nezinhlelo ze-TV; lapho-ke, kufanele wazi imininingwane eningiliziwe ngakho kokubili iNetflix neDisney Plus maqondana nokubhaliselwe kwabo, izinhlobo zemibukiso, umhlaba wanamuhla, nokunye okuningi. Ngakho-ke, kule ndatshana, sizokunikeza ukuqhathanisa okuningiliziwe phakathi kwalezi zinhlelo zokusebenza ezimbili, sikushiyele isinqumo sokuthi ikuphi okungcono kakhulu kuwe.
Imihlahlandlela Eminye Yokuqhathanisa:
IHulu vs Sling TV
INetflix vs Disney Plus - Ukuqhathanisa okuningiliziwe
Kokubili iNetflix neDisney Plus kungenye ye izinsizakalo ezithandwayo zokusakazwa kwe-TV , futhi iningi lenu kufanele libe nemali yabo yokubhalisa. Ukuqala ngohlobo noma okuqukethwe imibukiso ye-TV kuNetflix nakuDisney Plus, womabili anezinhlobo ezahlukahlukene. Ngenkathi iNetflix isebenza kakhulu ngokuqukethwe okudala, imibukiso kuDisney Plus igxile kakhulu kokuqukethwe okulungele umndeni. Njengoba iDisney Plus ithole ukuthandwa kakhulu, imibukiso eminingi ye-TV efana neMarvel shows isusiwe kuNetflix. Ngasikhathi sinye, ngisho neNetflix igxile kakhulu ekukhiqizeni okwangempela kwayo futhi inolunye uchungechunge olunjenge-Stranger Things, iFRI.E.N.D.S njengengxenye yalo. Manje ake siqhathanise izici ezahlukahlukene zombili.
Imali yokubhalisa yeDisney Plus incane uma iqhathaniswa neNetflix. Ukubhaliselwa kwanyanga zonke kweDisney Plus $ 6.99. Ngaphezu kwalokho, okubhaliselwe minyaka yonke kungu- $ 69.99. Lokhu kuthathwa njengohlelo oluyisisekelo lweDisney Plus. Ngakolunye uhlangothi, iNetflix inezinhlelo ezintathu ezihlukile zokubhaliselwe: i-Basic Plan, i-Premium Plan, nama-Standard Plans. Ngayinye yalezi zinhlelo inezici ezingeziwe.
Uhlelo olujwayelekile luzokwenza umsebenzisi akwazi ukuthola i-HD Quality kuze kube izikrini ezimbili. Ngenkathi iPrimiyamu Plan ivumela umsebenzisi ukuthi abuke imibukiso ye-TV namamuvi ngekhwalithi ye-HD kufika ezikrinini ezi-4. Uhlelo olubalulekile lungabiza cishe u- $ 8.99 ngenyanga, Izinga lingabiza cishe u- $ 13.99 ngenyanga, futhi okokugcina, iPrimiyamu Plan icishe ibe ngu- $ 17.99.
Njengoba sesike saxoxa, okuqukethwe nohlobo lwezinhlelo zokusebenza ezimbili zokusakaza i-TV kwehlukile. I-Disney Plus ine- isethi ehlukile yezinhlelo ze-TV nama-movie . Uzothola amafilimu athandwayo nochungechunge olufana ne-Star Wars, ama-movie we-Marvel, nokunye okuningi. Ngasikhathi sinye, inokuqukethwe kwayo kwasekuqaleni kungxenyekazi yayo, okwenza ikhethwe ngabaningi. Ngakolunye uhlangothi, iNetflix yethula izethameli zayo inqwaba yemibukiso yakudala efana neFRI.E.N.D.S, iHhovisi nezinye eziningi.
Futhi inenqwaba yokuqukethwe kwayo kwasekuqaleni, futhi ungakuthola imibukiso embalwa yoqobo kuNetflix , enekhwalithi enhle futhi enokuqukethwe okuhle nokuhlukile. Uma uthanda kakhulu ama-hit shows noma ama-movie kunokwangempela, iDisney Plus iyipulatifomu yakho. Ngenkathi uma kunguwe olangazelela okuqukethwe okuyingqayizivele njalo, iNetflix ingaba yisinqumo esihle.
Kokubili iDisney Plus neNetflix kuyatholakala kuzingxenyekazi eziningi ezifana ne-Android, iOS, firestick, amadivayisi we-Chromecast, ngisho naku-Personal Computer noma kuma-laptops; ungazijabulela lezi zinsizakalo zokusakazwa ku-inthanethi ngeziphequluli ezihlukile. Ngaphandle kwamazwe amane, iChina, iNorth Korea, iCrimea neSyria, INetflix iyatholakala emazweni we-190 . Ngakolunye uhlangothi, amazwe ambalwa kuphela afana ne-U.S., Canada, Australia, New Zealand Netherland, namanye.
IDisney Plus inemibukiso eminingi eyenzelwe umndeni nokuqukethwe kwayo kwasekuqaleni. Kodwa-ke, inzuzo yayo ebaluleke kakhulu eminye yemibukiso emihle kakhulu futhi enesilinganiso esiphakeme seMarvel, Pstrong, neStar Wars, okuvame ukuheha ukunaka kwabantu. Ngaphezu kwalokho, inamaphrofayli womsebenzisi ayisikhombisa, athe ukuphakama kancane kunalawo weNetflix, anamaphrofayili womsebenzisi amahlanu kuphela. Ngokuphikisana neDisney Plus, iNetflix kungenzeka ingafinyeleli kumabonakude athandwa kakhulu, kepha inokuqukethwe kwayo kwasekuqaleni, okuvamise ukuheha abantu.
Ukuza kusixhumi esibonakalayo sabo bobabili, ngamunye wabo une-interface yakhe ehlukile. IDisney Plus inokuqukethwe kwayo okuboniswe emigqeni evundlile ngephethini ehlanganisiwe. Ikukhombisa nokuqukethwe noma imibukiso engakuthakazelisa. Ngaphezu kwalokho, njengoba ikwazi ukufinyelela kwi-Marvel, Pstrong, National Geographic, ne-Star Wars, izinkinobho ezihlukile zenzelwe ngayinye. Ngakolunye uhlangothi, iNetflix inokuqukethwe kwayo okuhlelwe ngokuya ngezinhlobo ezahlukahlukene ezinjenge-thriller, amahlaya, noma ezothando. Ungabuka noma yimiphi imibukiso ngokwentando yakho.
Kokubili iNetflix neDisney Plus kunokuthile okuthokozisayo abangakunika abasebenzisi bayo. Ngasikhathi sinye, iDisney Plus iseza nemibukiso eyingqayizivele eyengeziwe nokunye okuqukethwe okuwusizo. Ngakolunye uhlangothi, iNetflix ithuthukile kancane futhi iyisinyathelo phambili ngokuqukethwe kwayo. Kodwa-ke, iDisney Plus inesipho esihle esingasenza kumsebenzisi waso uma kukhulunywa ngokubhaliselwe, kuyilapho iNetflix ingahle isinde kancane emaphaketheni. Ngaphezu kwalokho, iDisney Plus inezinhlelo ze-TV zawo wonke amaqembu wobudala, kusuka ezinganeni kuya kubantu abadala. Kodwa-ke, akunjalo ngeNetflix, engahle ithande intsha nabantu abadala.
Ama-Documentary Ama-10 Ahamba phambili Ku-Netflix
amawebhusayithi amahle kakhulu emidlalo yamahhala
bukela i-tv bukhoma ku-inthanethi mahhala akukho okulandwayo
amabhayisikobho asakazwa kakhulu ku-inthanethi mahhala
usifaka kanjani isandiso se-chromecast
kik online ukungena ngemvume ngaphandle kokulanda